Maitiro ekufananidza ako episodes akatarisa paPlex neTrakt.tv | IPhone nhau
Maitiro ekufananidza ako episodes akatarisa paPlex neTrakt.tv
Wese anoda terevhizheni nhepfenyuro anopfeka a kudzora kwemwaka iwoyo iwe wauchakamirira uye yezvitsauko zvausati waona izvozvi. Muchokwadi, iyo App Store izere nemaapplication anoshandira chaizvo izvi uye anokupa iwe nyaradzo yekugona kubva kune yako nhare kana Apple Watch kutara kuti iwe uchangobva kuona imwe episode yemimwe mwaka. Asi iwe waizofungei kana zvese zvikaitwa otomatiki? Kutenda Plex yeApple TV uye nesarudzo dzayo yekugadzirisa zvinogoneka uye isu ticha tsanangura kuti sei.
Trakt.tv ishumiro inoshandiswa nemashandisirwo akawanda senge iShows (yandinofarira) kushandisa kuwiriranisa zvikamu zvakaonekwa nemwaka yauri kutevera. Iyo webhu sevhisi ine yayo API iyo yatiri kuzotora mukana wayo kuwedzera kuPlex. Kutenda kune plugin yePlex inowanikwa paGitHub, maitiro acho ari nyore.
Chinhu chekutanga kugadzira account pa Trakt.tv, iyo inokurumidza uye yemahara. Tsvaga iyo GitHub peji kubva kuPlex-Trakt-Scrobbler, inova ndiyo inonzi plugin iyi. Dhawunorodha zip uye unzip pairi pakombuta yako, uye chengetedza iyo faira «Trakttv.bundle» inova ndiyo inotinakidza. Zvino enda kuPlex nzira uko masumbu anochengetwa woisa iyo faira ipapo:
OS X: ~ / Raibhurari / Yekushandisa Rutsigiro / Plex Media Server / Plug-ins
Linux: / var / lib / plexmediaserver / Raibhurari / Yekushandisa Rutsigiro / Plex Media Server / Plug-ins
Windows XP: C: Zvinyorwa uye Zvirongwa [zita rekushandisa] Yemunharaunda ZvirongwaApplication DataPlex Media ServerPlug-ins
Windows Vista uye gare gare: C: Vashandisi [zita rekushandisa] AppDataLocalPlex Media ServerPlug-ins
Zvino vhura Plex's "Media Manager" uye mu "Channel" isa iyo cursor pamusoro pe "Trakt" chiteshi icho changobuda, iwe uchaona cogwheel yaunofanirwa kumanikidza kumisikidza sevhisi. Isa zita rako rekushandisa uye password ye «Trakt.tv» uye tarisa bhokisi re "Scrobble" pazasi. Wobva wadzvanya pa "Sevha" uye iwe wawana zvese zvakagadzirira.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, pese paunotarisa zvakateedzana, chikamu chinomakwa sekuonekwa paTrakt.tv uye nekudaro mune ese mafomu anoshandisa sevhisi kuwiriranisa, seShows, iTV Shows 3 uye zvimwe zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekufananidza ako episodes akatarisa paPlex neTrakt.tv
Anopa hupenyu. akadaro
PaMac iyo Plex nzira haipo uye kana iwe ukaedza kugadzira iyo nzira iwe pachako uye nekuisa iyo yakadzingwa faira ipapo… ..haishande. MuPlex Channel iyo Trackt Channel haioneke.
Chero ani anoziva chero imwe nzira?
Pindura kuna David A.
Kana iyo nzira iripo. Enda kune iyo Finder menyu uye muGo-Nzira unamate iyo nzira sezvazvinoonekwa muchinyorwa. Iwe uchaona kuti iwe unopinda sei zvakananga mufaira iyoyo
Ruregerero! Warevesa. Kuitsvaga nemaoko handina kuiwana, asi mune iyo Tsvaga izere kumenyu «enda kufolda» uye unamatira nzira chaizvo sezvaunenge uchiratidza, zvaonekwa kwandiri.
Zvakare kukumbira ruregerero uye ndinokutendai zvikuru nemupiro
Senge haichashande. Ikozvino iri nePIN uye ini handina kukwanisa kuiwana kuti isimbise
Akabvisirwa kana mahara maapplication ausingakwanise kupotsa ino Svondo, Mbudzi 22